के मानिसहरु साचिकै घोडाबाट बनेको तेल प्रयोग गर्दछन? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > के मानिसहरु साचिकै घोडाबाट बनेको तेल प्रयोग गर्दछन?
म जापान बसेको पहिलो बर्ष, यहाँ बस्ने अन्य आगन्तुक एक्स्प्याट जस्तै आफुलाई चाहिने वस्तु आफ्नै देश बाट लिएर आउथे। मलाई लाग्यो मा यहाँ त्यो बस्तु पाउदिन होला या पाए पनि आफ्नो देश को जस्तो हुन्न होला। मलाई नभई नहुने एउटा यस्तै प्रोडक्ट मोइस्चराइजर थियो। मा यो सधै आफु बस्ने ठाउ टेक्ससबाट लिएर आउथे। जब मेरो स्टक सकिन लाग्दथ्यो म कि त फर्केर जान्थे कि त कोहि आउने साथी छ भने उसलाई मगाउथे।
म यो लोयल र भरपर्दो ग्राहक हुनुको पछाडी निकै ठुलो कारण पनि छ। मलाई पहिले मोइस्चराइजर भनेको जहाँ भएपनि एउतै त हो भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले मा ब्राण्ड पनि जे बहेनी प्रयोग गर्दथे। तर एक पटक को जाडो याममा स्किनमा एलर्जी भयो जिन्मैले प्रयोग गर्ने मोइस्चराइजरले झन् नराम्रो संग बिगार्यो। डर्माटोलोजिस्तलाइ देखाएपछि मात्र मेरो स्किन ठिक भयो। त्यो घटना पछि मेरो स्किन पहिलेको भन्दा निकै सेन्सेटिभ हुन पुग्यो। मेरो स्किन चाडै ड्राई हुने भयो। त्यस बेला बाट म आफ्नो मोइस्चराइजरमा अलि सतर्क भए।
म सधै आफ्नो ठाउकै मोइस्चराइजर प्रयोग गर्दथे। म निकै चाडो मोइस्चराइजर सिद्द्याउने भएकोले मैले अब चाहि जापानमै मिल्ने खालको ब्राण्ड खोज्न थाले। यो निकै गारो काम थियो। मा कहिले सफल हुन्थे त कहिले विफल। ड्रग स्टोरको स्टाफले कहिले मोइस्चराइजर बह्नेरा मलाई लोसन दिन्थे त कहिले दिऎको मोइस्चराइजर मैले पहिला प्रयोग गर्ने जति राम्रो हुन्नथियो।
मैले एकदिन वेल्सिया ड्रग स्टोरमा बायु नाम गरेको प्रोडक्ट देखे। मलाई पहिला त यो के हो भन्ने थाहा भएन। तर त्यसमा मोइस्चराइजर लेखेको देखे पछि मलाई यो पर्योग गरेर हेर्न मन लाग्यो। र मैले यो प्रयोग गर्न थाले। अनौठो कुरा मलाई यो निकै मन पर्यो। मलाई कुनै साइड ईफ़ेख्ट पनि भएन र मलाई यो मेरो पहिलेको मोइस्चराइजर को बदलामा प्रयोग गर्छु जस्तो लाग्यो र नियमित प्रयोग गर्न पनि थाले।
यो नया प्रोडक्टको नामको साब्दिक अर्थ घोडाको तेल हो। तर त्यो भन्दैमा यो घोडा बाट बनेको हुनु पर्दैन। २०००को दशकमा जेसिका सिम्पसनले रियालिटी शोमा टुना माछालाई के यो चिकन हो भनेर सोदेकी थीइन। उनले यो टुनाको क्यानमा चिकेन अफ द सी लेखिएको धेर भनेको थिइन्। टाइगर बाममा कसलेपो साचिकैको बाघ प्रयोग गर्छ? यी त सबै ब्राण्डिङ्ग गर्ने तरिका हो नि भन्ने थियो। तेसैले बायु पनि नाम मात्र हो जस्तो लाग्यो मलाई।
……तर, बायु भनेको साचिकै घोडाको तेल रहेछ।
मेरो जापानी साथिले भने पछि मैले थाहा पाए कि बायु प्रोडक्ट आफ्नो साब्दिक अर्थ संग मिल्दो रहेछ भन्ने। अब भने मलाई झन् कौतुहलता भयो। कसरि यो प्रोडक्ट बनाइन्छ होला। धेरै देशमा घोडाको मासु खाइदैन। तर यस्ता केहि देश छन् जहा खानको लागी घोडा पालिन्छ। जापान पनि एउटा तेस्तो देश हो। जापानीहरु घोडाको सासिमी र स्याबू स्याबू खान्छन। बायु घोडाको बाकि रहेको बोसो बाट तेल निकालेर बनाइन्छ। हुन पनि प्रयोगमा आउछ भने किन फाल्नु हैन र ?
बायुको ईतिहास निकै लामो छ। पहिले मानिसहरु यो आगोले पोलेको ठाउमा लगाउथे तर अहिले भने यसको प्रयोग फेरिएको छ। जापानको होक्काइदोमा यो बायु निकै लोकप्रिय भएको थियो। किनकि यो ठाउ निकै चिसो हुने हुनाले मानिसहरुलाई मोइस्चराईजरको खाचो पर्दथ्यो जुन काम बायुले निकै प्रभावकारी रुपमा गर्दथ्यो। बायु जापानमा मात्र नभएर पुर्बी एसियामा निकै लोकप्रिय भएको छ। जापान आउने पर्यटक हरुले यो वस्तु किन्ने गरेको पाइन्छ। जापानमा हजुरले अन्य थुप्रै कस्मेटिक सामन भेट्नु हुनेछ तर ति महँगो बस्तु भन्दा यो प्रयोग गरेर हेर्नु होस् हजुरलाई राम्रो लाग्ने छ।
बायुको क्वालिटी भने मूल्य अनुसार फरक पर्न सक्दछ। महगो बायुमा थप रसायन हालिएको हुन्न। तर सस्तो खालको बायुले पनि हजुरको स्किनलाई जाडो यामबाट बचाउने छ।